LA YAAB: Wargayska Marca Ee Madrid Ka Soo Baxa Oo Goolkii Cajiibka Ahaa Ee Lionel Messi Ku Tilmaamay Mid Iska Dhalis Ahaa Iyo Ciyaartoy Kale Oo La Siiyay. - Gool24.Net
LA YAAB: Wargayska Marca Ee Madrid Ka Soo Baxa Oo Goolkii Cajiibka Ahaa Ee Lionel Messi Ku Tilmaamay Mid Iska Dhalis Ahaa Iyo Ciyaartoy Kale Oo La Siiyay.
Kabtanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi ayaa markale saxaafada aduunka ku qabsaday wixii uu xalay ku sameeyay kooxda ay colaada wayni ka dhexayso Barca ee Espanyol isaga oo laba gool ka dhaliyay kulankii Camp Nou si uu guul kale ugu horseedo kooxda Valverde.
Laakiin wargayska Marca ee magaalada Madrid ka soo baxa ayaa si layaableh u sheegay in Lionel Messi aanu dhalin goolkii furitaanka ee Espanyol waxaana loo qoray ciyaartoy kale taas oo dad badan layaab ku noqotay. Messi ayaa daqiiqadii 71 aad ee kulankii Camp Nou waxa uu jabiyay iska caabintii Espanyol.
Goolkan ayaa ahaa mid noociisa aan hore Lionel Messi loogu arag isaga oo qaabka rekoodhe tuurista Panenka u tuuray kubbad laaga xorta ahayd wuxuuna ku dhaliyay goolkii furitaanka ee Barcelona balse maxay tahay sababta uu wargayska Marca goolkan uga qaaday Messi?.
Wargayska Marca ayaa goolkii furitaanka ee Barcelona ka dhigay gool uu iska dhaliyay xidiga kooxda Espanyol ee Victor Sanchez kaas oo isku dayay in uu joojiyo kubbadii uu Messi laaga xorta ah ku tuuray balse uu awoodi waayay in uu goolka ka joojiyo.
Warbixintii uu wargayska Marca ka qoray kulankii Catalan Derby ee Barcelona iyo Espanyol, waxaa lagu sheegay in Victor Sanchez uu iska dhaliyay goolkii furitaanka ee Barcelona markii ay ciyaartu maraysay daqiiqadii 71 aad waxaana isla magaca Victor Sanchez lagu muujiyay natiijadii ciyaarta markii la soo bandhigayay.
Miyuu Goolkii Lionel Messi ee laaga xorta ahaa noqon karaa Gool uu Iska Dhaliyay Victor Sanchez?
Xidiga kooxda Espanyol ee Victor Sanchez waxa uu xabadkiisa ama laabtiisa iskugu dayay in uu ku joojiyo kubbadii uu Lionel Messi laaga xorta ah ku tuuray, laakiin sida uu sharciga kubbada cagtu dhigayo haddii kubbadu ay bartilmaameedkeeda ku socoto oo ay gool noqoto waxaa goolkaas iska leh ciyaartoygii kubbada soo tuuray.
Waxa uu gool iska dhalis ah noqdaa marka uu ciyaartoy kubbad aan bartilmaameedka goolka haysan ay isaga ku dhacdo ee uu leexiyo ama duwo jihadii kubbada laakiin sida xaqiiqda ah, Victor Sanchez waxa uu awoodi waayay oo kaliya in uu kubbada ka joojiyo bartilmaameedkeeda, manay jirin leexin uu kubbada shabaqa kooxdiisa ku duway, waana sababta ay wargayska The Sun iyo dad kale layaab ugu noqotay in Marca uu Messi ka qaaday goolkii hadal haynta reebay.
Xidhiidhka kubbada cagta Yurub ee UEFA oo ah maamulka ugu sareeya ee kooxaha Yurub ayaan wax shaki ah galin goolkii Lionel Messi ee laaga xorta ah iyada oo waliba si layaableh looga hadlay waxaana la mid ah maamulka horyaalka La Liga oo aan iyaguna wax shaki ah galin goolkan.
Laakiin wargayska Marca ayaa muujiyay in goolkii furitaanka ee Barcelona uu ahaa mid iska dhalis ah waxaana lagu qoray xidiga kooxda Espanyol ee Victor Sanchez.